Dad ka badan 100 Qof oo lagu Dilay weerar ka Dhacay Paris – Radio Daljir
Nofeembar 14, 2015 1:15 b 0
Somalia, November 14, 2015 (Daljir) —Baliiska dalka Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen weeraro isxig-xiga oo ka dhacay caasimada Paris. Halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay.
· Ugu yaraan140 qof ayaa lagu dilay weeraro lo adeegsaday rasaas iyo qarxyo ka dhacay dhowr meelood oo caasimadda Paris ah
· 100 qof oo ka mid ah dadkaasi waxa ay ay ku dhinteen goobta acwayska Bataclan.
· Weerarada kale waxa ay ka dhaceen garoonka kubadda cagta ee Paris iyo muqaayad ku taalo waqooyiga Paris
· Faransiiska waxaa looga dhawaaqay xaalad deg deg ah, xaduudaha dalkane waa la xiray.
· Dadweynaha Paris waxaa loo sheegay inaysan guryahooda ka bixin.